Video: Roobab dad ku dhinteen oo ka da'ay degmooyinka gobolka Banaadir.
Tuesday November 26, 2019 - 10:40:16 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Shalay illaa Saqdii dhexe ee xalay waxaa magaalada Muqdisho ka da'ay Roob xooggan oo muddo socday kuwaasi oo dadka iyo duunyad ay si weyn ugu diirsadeen.
Roobabka oo ahaa kuwa mahiigaan ah ayaa saameyn ballaaran ku reebay xaafadaha magaalada, ugu yaraan 3 qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen roobabkii xalay iyo shalay da'ayay.
Guri kuyaal xaafadda Boondheere ayaa ku dumay qoyskii deganaa waxaana ku dhintay laba qof iyadoona dhaawacyo ay soo gaareen carruur iyo haween, sidoo kale xeryaha ay deganyihiin dadka barakacayaasha ah ee kuyaal degmada Hodon waxaa ku dhintay hal qof oo carruur ahaa.
Biyaha Xareedda ayaa jaray waddooyinka laamiga ah iyo kuwa Jid cadayaasha ah waxaana hakad ku jira isku socodka gaadiidka dadweynaha waxaana gaabis dhanka shaqada ah laga dareemayaa suuqyada waaweyn ee gobolka Banaadir sida Bakaaraha iyo Suuq Bacaad, degmada Xamar Weyne oo inta badan guryaheedu ay qadiimi yihiin ayaa laga cabsi qabaa in roobabku ay guryaha dumiyaan.
Waddooyinka laamiga ah ayay adagtahay in ay maraan Mootooyinka Bajaajta sababa laxiriira biyaha oo fadhiistay, adeegyadii dowladda hoose oo meesha ka maqan sida bullaacadihii biyaha ka dhuuqi jiray waddooyinka ayaa sababtay in roobabku cuuryaamiyaan isku socodka gaadiidka dadweynaha.